ICARPORT VS GARAGE (UMAHLUKO, INDLEKO KUNYE NEPROSES & CONS) - IIGARAJI
Eyona Iigaraji ICarport vs Garage (Umahluko, indleko kunye neProses & Cons)
ICarport vs Garage (Umahluko, indleko kunye neProses & Cons)
Kwesi sikhokelo sixoxa ngumahluko phakathi kwecarport vs igaraji kubandakanya ukulunga kunye nokubi, indleko, ukugcinwa kunye nobungakanani umahluko. Indawo yokuhamba inokuthi iqhotyoshelwe ekhayeni okanye kwindawo ezimeleyo ezinokufakwa ngaphandle kwemvume yokwakha kwaye ngexabiso eliphantsi kakhulu kunegaraji yesiko. Igaraji inokuba sisakhiwo esahlukileyo okanye iqhotyoshelwe ekhaya.
imidlalo oza kuyenza emtshatweni
Ngelixa i-carport ingabizi kwaye kulula ukuyifaka ihlala ishiya umnqweno omncinci xa kufikwa kumba wokuthintela isibheno. Igaraji kwelinye icala ibonelela ngokugcina kunye nokhuseleko olugqwesileyo kwaye ihlala ihambelana nalo lonke ikhaya lakho.
Fumanisa ukuba loluphi uhlobo olulungele wena njengoko sijonga kubuhle kunye neengozi zecarport vs igaraji.
Iinkonzo zeCarport kunye neengozi
Ixabiso leCarport Resale
Iinkonzo zeGaraji kunye neengozi
Ixabiso leGaraji lokuThengisa kwakhona
Iindleko zeCarport vs iGaraji
ICarport Vs Imvume yeGaraji
I-carport yindawo evulekileyo evulekileyo enezithuba, amacala abonakalisiweyo, kunye nesigqubuthelo esingaphezulu esenziwe ngamashiti amancinci esinyithi okanye i-aluminium sheet, iipaneli zefiberglass, ilaphu, okanye ezinye izinto ukukhusela isithuthi sakho elangeni, kwisichotho, kwikhephu nakwezinye izinto. imozulu eyonakalisayo.
IiCarports azibandakanyi iindonga ezisemgangathweni kodwa zinokugqunywa kwelinye icala okanye macala kwaye zihlala zizimeleyo ezizodwa ezingadibananga nekhaya. Ngelixa i-carport izakukhusela isithuthi okanye i-RV, ayinikezeli ubungqina bokugcinwa kwemozulu okanye ukhuseleko.
Xa uthatha isigqibo sokuba i-carport ngumdlalo ofanelekileyo kwikhaya lakho, jonga i-pros kunye ne-cons ngaphambi kokuthenga.
Ixesha elincinci lokufaka kunye nokubanakho okukhulu kwe-DIY
· Ambalwa xa kukho nayiphi na ikhowudi yokwakha kunye neemfuno zemvume
Isetyenziselwa ezinye iinjongo ezinje ngesigubungelo sepatio okanye indawo yokusebenza yangaphandle
· Kubiza kakhulu ukufakela kunegaraji
· Ayongezi ixabiso elibalulekileyo kwipropathi
· Ukhuseleko oluncinci kubusela bepropathi nokonakaliswa kwempahla
· Ayililo igumbi elisemthethweni, elongezelelweyo okanye enye indawo yokuhlala
Umnini khaya we-DIY okanye ingcali inokufaka i-carport, igcina engqondweni ukuba xa usongeza i-carport ekhayeni lakho, imbonakalo kufuneka ihambelane noyilo lwasekhaya okanye iluphucule ngokusetyenziswa kwemibala ehambelana nezinto.
Ngelixa i-carport ingalongezi ixabiso elibalulekileyo kwikhaya, kufuneka izise isibheno esongeziweyo ngelixa ukhonza ukukhusela izithuthi, izikhephe, ii-RV, okanye izithuthuthu.
Ngombala omncinci obiyelweyo njengodonga oluqhelekileyo okanye iingcango, izikhululo zeenqwelo moya azikhuselekanga kodwa zisebenza kakuhle ukugcina izinto ezinje ngezitulo zengca, izixhobo zeyadi, izinto zononophelo lwengca, kunye nezixhobo zemidlalo.
Amagama afanelekileyo ekhowudi yokunxiba
Ubungakanani becarport bumisela ukuba zingaphi izithuthi eziyakulunga phantsi kwayo. I-carport enye ineenyawo ezili-12 ububanzi kwaye yenzelwe imoto enye.
Iindawo eziphindwe kabini zokuhamba ukusuka kwi-18 ukuya kwi-24 yeenyawo ububanzi kwaye zilungele izithuthi ezimbini okanye iRV. I-carport kathathu iza ii-26 ukuya kwi-30 iinyawo ububanzi kwaye ilingana nezithuthi ezintathu, iRV, okanye isikhephe.
Ngelixa i-carport inganikezeli ngokhuseleko oluninzi kubusela okanye ekonakalisweni, iikhamera zokhuseleko kunye neenzwa zokuhamba ziwathintela amasela kwaye zivumela ukubonwa okunokwenzeka ukuba izinto zibiwe.
Izikhululo zeenqwelo-mafutha ezine-fiberglass, ifreyimu yeplanga eneepaneli zeplastiki, okanye ezinye izinto ezigqunyiweyo, eziqhotyoshelwe okanye ezixhonywe emacaleni naseziphelweni, zenza kube nzima ukungena ngaphakathi kwaye zinokuwakhusela amasela angafuni kuthatha ixesha lokuphula- phakathi.
I-carport ayinakulongeza ixabiso lokuthengiswa kwakhona kwekhaya. Uluhlu lwepropathi kodwa aluyonxalenye yekhaya lesikwere.
Iindleko ezincitshisiweyo ze-carport lukhetho olufanelekileyo xa umninikhaya efuna ukugcinwa kodwa enohlahlo-lwabiwo mali olulinganiselweyo kwaye kukho iimeko ezithile apho umthengi wasekhaya angayithanda indawo ekugcinwa kuyo izithuthi kuba engenandawo yokugcina isithuthi sakhe kwaphela.
Igaraji yakhiwe ngeendonga ezisemgangathweni, iindawo zombane, izibane, kwaye zinokubandakanya ukugquma kunye neendonga ezigqityiweyo.
Abanini makhaya, abafuna ukusebenzisa igaraji kwiofisi yasekhaya, itheko lasekhaya ngamanye amaxesha, okanye indawo yokubukela ezemidlalo, banokufaka ukufudumeza kunye nomoya opholileyo.
Uninzi lweegaraji ziqhotyoshelwe ekhayeni, kodwa ezinye iigaraji zihlukanisiwe okanye zimi simahla. Bona i Umahluko phakathi kwegaraji eziqhotyoshelweyo Apha.
· Ukhuseleko lwepropathi enkulu kunye nokukhuselwa kubusela
Lula ukuguqula ibe yindawo yokuhlala okanye indawo yokusebenza
Ukwandisa ixabiso lepropati
· Yongeza i-square footage kulondolozo lwasekhaya
· Iikhowudi zokwakha ezingqongqo kunye neemfuno zemvume
· Iindleko ezingakumbi zokwakha okanye zokongeza
· Ifuna ulondolozo olufana nekhaya
Iigaraji ngokubanzi zihambelana nombala wekhaya kunye nesikimu sezinto kwaye ziza kukhetho oluninzi loyilo. Iigaraji ezilungele iimoto ezimbini zihlala zinomnyango omnye wegaraji osebenza ngesandla okanye ngokusetyenziswa kombane Ukuvula ucango lwegaraji .
Nangona kunjalo, ezinye uyilo zivumela iingcango zegaraji ezimbini, ububanzi banele ngokwaneleyo ukuba kudlule isithuthi esinye kwaye sinodonga lwangaphandle oluncinci phakathi kwabo.
Zininzi uyilo lomnyango wegaraji, kubandakanya ukhetho lombala, ipateni, izinto eziphathekayo, iifestile kunye neendlela. Nokuba ukhetha i igaraji ezimeleyo okanye enye iqhotyoshelwe kwikhaya inokwenziwa ngokwezifiso zakho
amalahle amdaka umama wengubo yomtshakazi
Olu khetho luvumela uyilo lwasekhaya ukuba luphuculwe yigaraji okanye ukhetho lomnyango wegaraji lunokuba kukuqhubekeka kwangaphandle kwekhaya. Jonga igalari yethu ye Imibala yomnyango wegaraji Apha.
Igaraji ibonelela ngokugcina okomileyo, okukhuselekileyo, okuhlala kulawulwa yimozulu hayi kuphela izithuthi okanye ii-RV, kodwa zikwalungele ukugcina ezinye izinto ezininzi ezinje ngezixhobo zemidlalo, izixhobo zeyadi, izinto zasegadini, izinto zokugcina ibhokisi, kunye nokunye.
Igaraji ithathwa njengeyona ndawo iphakamileyo kakhulu yokugcina njengoko izinto zihlala zingabonakali. Fumana Izimvo zokugcina igaraji kweli phepha.
Iigaraji ziza ngobukhulu obahlukeneyo kunye nezitayile kubandakanya igaraji yemoto enye, ukulinganisa i-12 iinyawo ububanzi kunye neenyawo ezingama-20 ubude, igaraji enemoto ezimbini ezilinganisa i-22 iinyawo ububanzi nge-20 iinyawo ubude, kunye negaraji yeemoto ezintathu ezilinganisa i-31 iinyawo ububanzi nge-20 iinyawo nde.
Zezi ubungakanani bemigangatho esemgangathweni kubandakanya udonga lwangaphakathi kubungakanani bodonga kwaye zixhomekeke kulwakhiwo ngumakhi okanye ngumthengi wasekhaya.
Iigaraji zeetandem zinde kwaye zivumela iimoto ezimbini ezimileyo, enye emva kwenye.
Iigaraji zinokutshixa ngasemva okanye icala ngaphandle komnyango wokungena kunye nomnyango okhokelela ekhaya.
Umnyango wegaraji uqobo, ukuba uyincwadi yesikhokelo, uza kunye nesitshixo kunye nesitshixo, esidityaniswe ngaphakathi kwesiphatho esingaphandle, kunye nokuvula umnyango wegaraji yombane kubandakanya ulawulo olukude olucwangciswe ngekhowudi eyimfihlo. Yonke le yimisebenzi yokhuseleko kodwa ayikho ngaphandle komngcipheko wokungena.
Iikhamera zokhuseleko, iisenzi zesandi, kunye nealam zokungena emnyango zongeza umaleko wokhuseleko ukukhusela izithuthi, izinto ezizezakho kunye nezinye izinto ezigciniweyo.
Igaraji yenza naliphi na ikhaya libe nomtsalane ngakumbi kubathengi basekhaya kwaye yongeza ukuya kwi-80% yemali kutyalo-mali lweendleko zokwakha enye.
Abathengi abanokubakho kunye neearhente zezindlu nomhlaba bajonga igaraji njengendawo yokwenza okanye yokuqhekeka xa bexabisa ikhaya. Iigaraji, nokuba ziqhotyoshelwe okanye zahlukanisiwe, ziphakamisa kakhulu ixabiso lasekhaya.
I-carport ihlala sisiqingatha sexabiso lokongeza igaraji eyakhelwe kwikhaya okanye njengegaraji eyahlukileyo. Indawo enye yokuhamba ngenqwelo moya eyi-3,000 ukuya kwi-10,000 yeedola.
Iphakheji yegaraji esele ikhethiwe ixabisa i-10,000 ukuya kwi-15,000 yeedola, kwaye xa ukhetho longeziwe ukugqiba okanye ukuphucula indawo yegaraji, indleko inokunyuka iye kwi-50,000 okanye kwi-100,000 yeedola. Funda ngakumbi nzulu malunga ne Iindleko zokwakha igaraji Apha.
Izinto zothando zokwenza kwi-tulsa
Soloko ujonge isebe lekhowudi yokwakha yendawo ukufumana iimvume xa ufaka ikhapoti okanye igaraji, kodwa izikhululo zeenqwelo moya azifuni iikhowudi zokwakha njengoko ikhaya lisenza, kwaye uninzi lwezixeko aludingi mvume.
Igaraji eqhotyoshelweyo okanye evalelweyo iya kufuna imvume. Xa igalaji incanyathiselwe ekhayeni, kufuneka kubekho iindonga ezingatshiyo phakathi kwekhaya elo kunye negaraji, kwaye nawuphina umbane ufuna imvume eyahlukileyo.
Igaraji egudileyo kufuneka ivunyelwe kodwa ineemfuno ezahlukeneyo kunye neekhowudi ekufuneka zilandelwe.
Ukuphanda ngaphambi kokuthatha isigqibo nge-carport okanye kwigaraji kukubonelela ngolwazi olufunekayo ukuze ukhethe ukhetho olulungele iimfuno zakho kunye nohlahlo-lwabiwo mali.
Ukuba unomdla wokudala isicwangciso sakho sesiko kukho Isoftware yoyilo lwegaraji oko kunokunceda. Oku kuyakuvumela ukuba uyile uyilo lwakho ngokobungakanani beyadi yakho, emva koko uyile kwaye ubone ngeprojekthi yakho.
umnyango wegaraji ebomvu
iyintoni intsingiselo ye-rsvp
izimvo zokuvuselela izibhambathiso iminyaka eli-10
Eyona ndawo intle yokutshata
igumbi lombala weti
indlela yokuphendula kwi-rsvp ukuba ayizukuya
ungathini xa ucebisa